ဖွမ်းပွေါင် ဒွန်းကျန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိုင်း အမျိုးသမီး အဆိုတော်
ဤ ဆောင်းပါးသည် မည်သည့် ကျမ်းညွှန်း (သို့) အကိုးအကား ကိုမှ ရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိပေ။ ကျေးဇူးပြုပြီး စိတ်ချယုံကြည်နိုင်လောက်သော အချက်အလက်ရင်းမြစ် များကို ကိုးကားရည်ညွှန်း၍ ဤဆောင်းပါးကို မွမ်းမံ ပေးပါ။ အကိုးအကားမပါသော အချက်အလက်များသည် စောဒကတက်ခြင်းခံရနိုင်ပြီး ဖယ်ရှားခြင်းပါခံရမည်ဖြစ်သည်။ (၂၇ မတ်လ ၂၀၁၈)
ဖွမ်းပွေါင် ဒွန်းကျန် (ထိုင်း: พุ่มพวง ดวงจันทร์; အင်္ဂလိပ်: Pumpuang Duangjan) သည် ထိုင်းအမျိုးသမီးအဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၄ ဩဂုတ်လ ၁၉၆၁ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၃ ဇွန်လ ၁၉၉၂ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူသည် အရေးဆုံးလုထွန်းသံစဉ် (luk thung) အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
(1961-08-04)၄ ဩဂုတ်၊ ၁၉၆၁
၁၃ ဇွန်၊ ၁၉၉၂(1992-06-13) (အသက် ၃၀)
၁၉၇၇ - ၁၉၉၂
ဤ ဆောင်းပါး contains พุ่มพวง ดวงจันทร์ (th.wikipedia) မှ ဘာသာပြန်ထားမှုများ ပါဝင်သည်။
Nak Rong Baan Nok (นักร้องบ้านนอก)
Noo Mai Roo (หนูไม่เอา)
Kho Hai Ruai (ขอให้รวย)
Nad Phop Na Ampoer (นัดพบหน้าอำเภอ)
Take Ka Tan Phook Bo (ตั๊กแตนผูกโบว์)
Anitja Tinger (อนิจจาทิงเจอร์)
Aai Saang Neon (อายแสงนีออน)
Nang Sao Ka Thi Sod (นางสาวกะทิสด)
Khoe Thot Tee Thee Rak (ขอโทษที ที่รัก)
Jong Ang Pangad (จงอางผงาด)
Thee Rak Ter Yoo Nai (ที่รัก เธออยู่ไหน)
Mue Puen Khon Mai (มือปืนคนใหม่)
Sanae Nak Rong (เสน่ห์นักร้อง)
Chaloey Rak (เชลยรัก)
Pleng Rak Phleng Puen (เพลงรัก เพลงปืน)
Phet Payak Rat (เพชรพยัคฆราช)
↑ ปราการด่านสุดท้าย (2011-07-19)။ ชีวิต แม่พุ่มพวงค่ะ ไปเจอมาเราว่าละเอียดที่สุดแล้วค่ะ (in Thai)။ Pantip.com။
↑ Dance and Music။ Thai Culture။ OnlyChaAm.com။7November 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။တမ်းပလိတ်:Unreliable source?
↑ Lockard, Craig (2009). Southeast Asia in World History. Oxford University Press. ISBN 0195338111။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖွမ်းပွေါင်_ဒွန်းကျန်&oldid=529600" မှ ရယူရန်
၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၁၀:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၂၀၊ ၁၀:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။